मृगौला खराब के कारणले हुन्छ ?
HOME » मृगौला खराब के कारणले हुन्छ ?
एजेन्सी। मृगौला खराब भएका बिरामीहरुको बारेमा पछिल्लो समयमा धेरै सुन्ने गरिन्छ। मृगौला खराब भएर अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्र अस्पताल जाँदा धेरै जानको मृत्यु भएको छ। मृगौलाले हाम्रो शरीरको विकारलाई छान्ने काम गर्छ। यदि मृगौला खराब भयो भने हाम्रो रगत छानिन पाउदैन र विभिन्न रोग लाग्छन्।
धुम्रपान र सुर्ती मृगौलाको लागि हानिकराक हुन्छ। यसले रगत बहाव सुस्त हुन्छ र मृगौलालाई रगत मिल्दैन। जसले गर्दा मृगौला खराब हुन्छ।
पानी नखाने बानीले पनि हाम्रो मृगौलामा असर पर्छ। पानी नपिउनालॆ मृगौला र मुत्रनलीमा संक्रमण हुन्छ। पानीको कमीले नै मृगौलामा पत्थर हुने सम्भावना बढ्छ। पिसाब रोक्ने बानीले पनि मृगौलामा असर पर्छ। त्यसैले पिसाब रोक्ने बानी गर्नु हुँदैन। अत्यधिक रुपमा नुन पिउनलाले पनि मृगौलामा असर पर्छ।
हाई ब्लड प्रेसरका कारण पनि मृगौलामा असर पर्छ। त्यसैले ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ।
अत्यधिक रुपमा दुखाई कम गर्ने औषधी खानाले पनि मृगौलामा असर पर्छ। त्यसैले थोरै दुखाई हुने बित्तिकै सिटामोल, निम्स खानु हुँदैन।
सुगर रोगका कारण पनि मृगौला खराब हुन्छ। त्यसैले सुगरलाई ७३घढसकन्ट्रोल७३घढस गर्नु आवश्यक हुन्छ। रक्सी र चिसो पेय पदार्थ अत्यधिक पिउनाले पनि मृगौलामा असर पर्छ। सन्तुलित भोजन नखाने वा भोकलाई दबाउने गर्दा पनि मृगौला खराब हुनसक्छ।